6 Waxyaabaha Warshadaha Anime Ugu Baahan Yahay Tobanka Sano Ee Soo Socda - Kale
6 Waxyaabood Oo Loo Baahan Yahay Inay Ka Dhacaan Warshadaha Anime (10 Sano Laga Bilaabo Hada)
Ma rajaynayo in warshadaha anime-ku noqdaan kuwo hagaagsan. Ma jiraan wax noocaas ah.
Kaamilnimadu way adag tahay.
Kaliya fiiri warshadaha la midka ah sida muusikada ama ciyaaraha.
Labada warshadoodba uma dhibaataysna Budhcad-badeedda sidii hore. Muusikada iyo ciyaaraha ayaa si xawli ah ugu xuub siibtay 15-kii sano ee la soo dhaafay.
Haddana muusigga gaar ahaan walina la ildaran Burcad Badeedka (iyo royalties) illaa xad, iyadoon loo eegin inta horumar ee aan aragnay illaa iyo hadda.
Warshadaha anime waxay qaadi doonaan waddo isku mid ah tobanka sano ee soo socda.
Waa tan waxa aan jeclaan lahaa inaan arko mustaqbalka, laga bilaabo 2018 iyo wixii ka dambeeya…
6 Waxyaabaha Warshadaha Anime Ugu Baahan Yahay Tobanka Sano Ee Soo Socda:
1. Ruqsad siinta adduunka bilaa xaddidaad
Khariidadaha wadamada loogu talagalay qufulada gobolka.
Sanqadhyo aan macquul ahayn miyaanay ahayn? Taasina waa sababta ay ugu baahan tahay inay dhacdo.
Waxaan ka fogaaneynaa wax walboo oo kale waligood dhaca.
Waqtigan xaadirka ah ee 2018, wali waxaad u badan tahay inaad la kulanto mid ka mid ah fariimahan dhibsanaya ee ku yaal goobaha socodka sharciga…
Waan ka naxay tan xitaa waxay ku dhacdaa meel sida UK oo kale ah. Laakiin waa inaanan noqon.
Taageerayaasha anime ee Hindida ah waxay la kulmaan isla buul sidoo kale. Sidaas oo kale Yurub, Indooniisiya, iyo dalal kale oo aad u tiro badan in la magacaabo.
Laakiin maxaa dhacaya haddii aan ka takhalusi lahayn dhibaatadan rukhsadda 10ka sano ee soo socda?
Sidee warshadaha anime u ekaan lahaayeen haddii qof kastaa awood u leeyahay inuu soo daayo anime bilaa xaddidaad, xaddidaad iyo xayiraad waddan ah?
Haddii taasi run noqotey run, sidee buu noqon doonaa Burcadbadeeddu?
Immisa lacag ah ayaa dib ugu soo laaban doonta warshadaha tan iyo markii taageerayaal anime badani ay lacagtooda ku bixin doonaan adeegsiga qulqulka kuwaas oo xitaa ka qiimo badan marka la barbardhigo?
Ma aha in la sheego badeecada iyo alaabada kale ee anime?
Way iska cadahay in waxa noocaas ahi dhacayaan:
Maalmaha la isticmaalayo dhaqammadii hore ee ganacsiga sida anime loo sharciyeeyay… Waa inay dhammaataa.
Ganacsataduna waxay u baahnaan lahaayeen inay la yimaadaan qaacido cusub oo shati loogu soo saaro wax soo saarkooda qaab faa iido leh, wax ku ool ah, hufan oo dabacsan.
Hal shay ayaa badalaya warshadaha anime habeenkii. Sababta oo ah xaalad sidan oo kale ah:
Ganacsatada leh liisamada ayaa lacag samayn doona.
Shirkadaha soo dejinaya waxay si fudud uga farxin karaan macaamiishooda.
Taageerayaashuna sidoo kale way sii farxi lahaayeen.
Haddii qof walbaa ku faraxsan yahay, warshadaha lafteedu waxay ku horumari lahaayeen dhibic inta badan dadka shakiga qaba xitaa ma rumaysan doonaan inay suurtagal tahay.
Akhriso: Maxay Budhcad badeedu u dhaawaceysaa Warshadaha Anime, isla markaana ay ku caawineysaa waqti isku mid ah
2. Iska yaree qaybinta anvvyada dimeed
Cds-ka iyo dvds-ka ayaa hoos u sii dhacayay ilaa 2006.
DVD-yada ku jira Warshadaha Anime waxay mareen waddo isku mid ah waqti aan dheerayn.
Anime DVD-yada ayaa hoos u dhacayay in kabadan 12 sano.
Laakiin waa tan waxa jira: xitaa sanadka 2018, shirkaduhu wali waxay ku adkeysanayaan inay qarash badan ku bixiyaan qaybinta anime dvds, inkasta oo ay ka warqabaan inay lacag luminayaan. Lacagna way lumineysay sanado, joogsi la'aan.
Iyo habka, waan fahmay sababta.
Dvds dhib. Dadka qaar wali wey iibsadaan DVD-yada waana soo ururiyaan. Internetku si buuxda ugama uusan badalin oo malaha marna goor dhow, 100%.
Laakiin markaad eegto sawirka weyn waa qashin iyo nacas. Internetku meelna uma socdo.
Wax cusub oo cusub mustaqbalka ee warshadaha anime waxay ka dhici doontaa khadka tooska ah. DVD-yada ayaa dhimanaya.
Ma jirto rajo laga qabo in la isku dayo in la badbaadiyo wax horeyba ugu jiray taageerada nolosha, iyada oo aan lahayn daawo ka badbaadisa nolosheeda in ay ku timaado dhammaadka naxdinta leh, ugu dambeyntiina.
3. Xaqiiqada Kordhay
Xaqiiqdii waxaa jira fiidiyow la xiriira tan oo leh fikrado hore oo ah waxa aad filan lahayd inaad aragto.
Marka laga reebo waxay noqon doontaa maskaxda in la afuufo maadaama ay isbeddeleyso 10-ka sano ee soo socota.
Xaqiiqda dhabta ah wali waa ilmo. Waxay noqon doontaa in ka badan 10 sano ka hor inta aan ka filan karno wax kasta oo ballaaran oo ka socda warshadaha anime.
Markaa halkan ku sheegi maayo.
Laakiin xaqiiqda la kordhiyay waa sheeko ka duwan.
Pokemon Go wuxuu jebinayaa caqabadaha leh AR. Xitaa haddii ay tahay heer 'yar'.
Laakiin runtu waxay tahay waxaad arkaysaa waa uun dulmar yar oo ah waxa iman doona mustaqbalka.
Anime AR, waxaad kuheli doontaa jilayaasha aad jeceshahay aduunka dhabta ah. Aniguna kama hadlayo qaab yaab leh, laakiin in badan oo ka mid ah hab xiiso leh oo xiiso leh.
Nooca waxa kaliya ee aad la kulanto kaliya hal jeer noloshaada haddii aad doorato.
Iyo ka sii muhiimsan: tani waxay u fureysaa qaab ganacsi cusub oo warshadeed.
Taas macnaheedu waa: lacag badan mustaqbalka fog.
4. Anime badan oo muujinaya anime muujinaya dalab (duug iyo cusub)
Guluf waa mustaqbalka. Ma jiro wax la isku haysto arrintaas (inaad dhagax ku hoos noolaato mooyee).
Iyo in ka badan wax kasta oo kale, adeegyada qulqulka anime waxay ubaahantahay aruurin ballaaran oo bandhigyo ah dalab.
Sababtoo ah halkan waa runta naxariis darrada ah ee maanta taagan:
Sababta kaliya ee aan u isticmaalno baraha burcad-badeedda ayaa ah WAAYO oo ay bixiyaan adeeg wanaagsan.
Qeyb ka mid ah adeeggaas ayaa ah anime aan xad lahayn oo muujinaya anime ayaa dalbanaya.
Haatan, ma laha goob socodsiin sharci ah oo anime ah ayaa sheegan kara. Xitaa ma dhawa.
Badanaa, goobaha qulqulka anime ayaa ugufiican bandhigyada cusub, maadaama aysan jirin bandhigyo badan oo duug ah.
Mar labaad, xaddidaadda ruqsadaha ayaa lagu eedeynayaa halkan.
Ma awoodid runti eedee shirkadahan anime streaming.
Japan waa wadnaha anime iyo warshadaha, sidaa darteed wax kasta oo lagu sameeyo meel ka baxsan Japan waxay ku jirtaa naxariista sidee ganacsi bay sameeyaan.
Laakiin 10-ka sano ee soo socda gudahood, way fiicnaan lahayd in horumar laga arko aaggan. Gudaha weyn jidka.
Hal shay kaligiis ayaa sameyn doona farqi weyn marka loo eego inta badan dhibaatooyinka kale ee warshadaha soo food saara.
La xiriira: 7-da Dhibaato ee ugu waawayn ee soosaara Anime
5. Qadar weyn oo anime ah ayaa muujinaya in loogu magac daray (hore iyo cusub)
Tani waa xanaaq kale oo ka jira warshadaha anime.
Waa wax malaayiin taageerayaal ah jeclaan lahaa inaan arko. In kasta oo waxa loogu yeedho 'nacayb' bandhigyada la yaqaan ayaa umuuqda inay helayaan.
Miyaad ogaatay inta bandhig hoosaadyo ay sii deyso xilli kasta season la'aan beddelaad loogu magac daray?
Kaliya waa markii anime-ka uu caan ku yahay wanaagiisa, in nooca loo yaqaan 'naanaysta' ah loo sameeyo isku mar marka la sii daayo.
Haa waxaa jira bandhigyo aan caan ahayn taas sidoo kale hel magac ahaan, sida Malaa'igta Dhimashada, Jasiiradda iyo wixii la mid ah.
Laakiin guud ahaan, kuwani waa kuwa laga reebay oo aan waligood caadi ahayn.
Taasina wali waa run Oktoobar 2018.
Arrin kale oo xusid mudan ayaa ah riwaayadaha waayeelka ah waa in lagu magacaabaa marar badan sidoo kale.
Inta badan waan sugeynaa SANO anime show si looguugu magac daro. Mana aha sida aan jaahil u ahay sababaha.
Ruqsad siinta waa xanuun ku dhaca dabada. Wax walbo intaas ayey ku laaban yihiin. Bandhigyada la magacaabayna waxay si cad u qaadanayaan waqti, lacag iyo dadaal si loo abuuro.
Laakiin wali: soo jiidan tan waxay noqon doontaa a heshiis weyn loogu talagalay warshadaha anime 10ka sano ee soo socota.
Xitaa haddii ay tahay oo keliya miisaanka yar, laakiin ku filan in la sameeyo a weyn farqiga isku mar.
La xiriira: 16 Ka Mid ah Bandhigyada Anime ee Ugu Caansan
6. Moodello ganacsi oo cusub, oo ka wanaagsan
Waa ii cadahay moodellada ganacsi ee ka socda warshadaha anime-ku uma shaqeeyaan sidii ugu wanaagsaneyd ee ay kari karto.
Ha u qalloocin. Waan ogahay anime inuu lacag samaynayo… badan oo ka mid ah. Lambarraduna way sii kordhayaan oo way sii cayilayaan markay sii socdaan sannadaha.
Laakiin ma caawin karo laakiin waxaan dareemayaa moodooyinka ganacsiga (sida lacagta loo sameeyo) warshadaha anime waxay u baahan yihiin horumar.
Dhamaanteen waan ognahay nafta burburinaysa mushaaraadka lagu bixiyo warshadaha. Taas ayaa ka xun wax kasta oo aad isbarbar dhigi karto.
Xayawaan yaraanta. Tani waa sababta oo ah xaaladaha shaqada la xidhiidha warshadaha anime. Sababay inta badan sida ay faa'iido u leedahay shirkad anime.
Iyo sida cad arrimaha kale ee ku hoos dhuumanaya dusha sare.
Waxaan dareemayaa inay jiraan caqabado badan oo hortaagan samaynta “moodooyinka ganacsiga” ee warshaduhu inay noqdaan kuwo xoog badan, ka fiican, waxtar badan oo guuleysta.
Laakiin waxaa laga yaabaa in 10ka sano ee soo socda gudahood ay tahay waqtigii la qaadan lahaa moodooyinka ganacsi ee aan ku dhex leenahay warshadaha, oo aan iyaga siino xoogaa habayn wanaagsan ah.
Malaha waxay u baahan tahay matoor cusub.
Ama waxaa laga yaabaa in wax ka beddel dhammaystiran oo wada socda.
Hadday waxyaalahani dhacaan:
Warshadaha anime ayaa noqon doona soo jiidasho badan si dadku uga fikiraan ka shaqaynta iyo dhisida xirfad ka baxsan.
Farshaxanno badan oo anime ah iyo Mangaka ayaa yeelan doona fursado fiican (waa laga yaabaa).
Shaqooyinka Anime waxay noqon doonaan kuwo soo jiidasho leh dibedda Japan.
Anime wuu kori doonaa oo wuu ballaadhin doonaa sidii aanu hore u arag.
Dad badana waxay qayb ka noqon doonaan warshadaha. Hadday yihiin taageerayaal, milkiileyaal ganacsi ama haddii kale.
Waxyaabaha aan soo sheegay qaarkood waxay noqon karaan fiditaan. Ama waa laga yaabaa inaysan ahayn. Waxay kuxirantahay waxa adiga aamin waa suurtagal.
Laakiin aniga ahaan, ku guuleysiga kalabar waxyaabahan 10ka sano ee soo socda waxay umuuqataa wax laqaban karo. OO Haboon.
Hadal sharafeedyo sharaf leh oo 'fiican' in la haysto:
Hagaajinta VR (xaqiiqda dhabta ah).
Waa maxay sababta Warshadaha Anime ay wali ugu jiraan Wajigii 'Bilaabashadooda'
KHUDBADDA Calaamadaha Anime ee u muuqda “Caddaan '